We.com.mm - စူပါမန်းမင်းသားချော ဟင်နရီကဗေးလ် ဂျိမ်းစ်ဘွန်းမင်းသားသစ်ဖြစ်လာမှာလား?
စူပါမန်းမင်းသားချော ဟင်နရီကဗေးလ် ဂျိမ်းစ်ဘွန်းမင်းသားသစ်ဖြစ်လာမှာလား?
စူပါမန်းမင်းသားအဖြစ် လူသိများတဲ့ အင်္ဂလိပ်မင်းသားချော ဟင်နရီကဗေးလ် (Henry Cavill) တစ်ယောက် DC နဲ့ လမ်းခွဲပြီး စူပါမန်းအဖြစ်ကနေ နှုတ်ထွက်သွားခဲ့ပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံတကာက သူ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ ဟင်နရီ့ ကို ဂျိမ်းစ်ဘွန်းဇာတ်ကောင် နေရာကနေ တွေ့မြင်ရဖို့ မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းက ဟင်နရီ တစ်ယောက် ဂျိမ်းစ်ဘွန်းနေရာအတွက် သတင်းတွေပြေးနေခဲ့တာပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းတုန်းက ဟင်နရီ့ကို 007 အေးဂျင့်တစ်ယောက်အသွင်ဖန်တီးထားတဲ့ fan art တစ်ခု ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစား နေပါတယ်။ ဟင်နရီအနေနဲ့ လက်ရှိဂျိမ်းစ်ဘွန်းမင်းသား ဒန်နီရယ်ကရိတ်ချ်နေရာမှာ အစားထိုးပြီး 007 မင်းသားသစ်ဖြစ်လာမယ့် ကောလာဟလသတင်းတွေဟာလည်း အသစ်ပြန်ဖြစ်လာခဲ့ပြန်ပါတယ်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်ရဲ့ Mission: Impossible – Fallout နဲ့ Night Hunter ရုပ်ရှင်မှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ဟင်နရီဟာ အခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့ ခြေကျင်းဝတ်ဒဏ်ရာကြောင့် အနားယူနေပါတယ်။ သူဟာ ပြသမယ့်နှစ်အတိအကျ မကြေညာရသေးတဲ့ Enola Holmes ရုပ်ရှင်မှာလည်း ရှားလော့ခ်ဟုမ်းစ်အဖြစ် ပါဝင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အများသိပြီးသလိုပဲ လက်ရှိဂျိမ်းစ်ဘွန်းမင်းသားဖြစ်တဲ့ ဒန်နီရယ်ကရိတ်ချ်ဟာ ၂၀၀၆ ခုနှစ်ရဲ့ Casino Royale ရုပ်ရှင်ကစလို့ ဂျိမ်းစ်ဘွန်းအဖြစ် ပါဝင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ လာမယ့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မှာ ပြသမယ့် ဂျိမ်းစ်ဘွန်း ရုပ်ရှင်သစ် “Bond 25” ရိုက်ကူးပြီးရင်တော့ ကရိတ်ချ်ဟာ ဂျိမ်းစ်ဘွန်းအဖြစ်ကနေ အနားယူတော့မှာ ဖြစ်ပါ တယ်။ အဲဒါကြောင့် အစားထိုးမယ့် ဂျိမ်းစ်ဘွန်းမင်းသားသစ်နေရာအတွက် နိုင်ငံတကာပရိသတ်တွေက စိတ်ဝင် စားနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျိမ်းစ်ဘွန်းမင်းသားသစ်ဖြစ်လာဖို့ သတင်းကြီးနေတဲ့ မင်းသားတွေထဲမှာ ဟင်နရီကတော့ ထိပ်ဆုံးကပြေးနေ တယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ အသက် ၃၆ နှစ်အရွယ် မင်းသားချော ဟင်နရီဟာ ယောကျာ်းပီသစွာ ခံ့ညားချောမောတဲ့ ရုပ်ရည်နဲ့ ထောင်ထောင်မောင်းမောင်း အရပ်အမောင်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်ပြီး 007 အေးဂျင့်လို နေရာမျိုးနဲ့ အတော်လေး လိုက်ဖက်ညီသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဟင်နရီဟာ ၂၀၀၁ ခုနှစ်ကတည်းက အနုပညာလောထဲ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ရုုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းများစွာမှာ ပါဝင်ခဲ့ပါ တယ်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာတော့ စူပါမန်း solo ရုပ်ရှင် Man of Steel မှာ DC ရဲ့ နာမည်ကျော် Superhero ဇာတ်ကောင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Superman အဖြစ် ပါဝင်ခဲ့ပြီး ပိုမိုနာမည်ကျော်ကြားလာခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်ရဲ့ Batman v Superman: Dawn of Justice နဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ရဲ့ Justice League တို့မှာလည်း Superman အဖြစ် ဆက်လက်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
အခုအချိန်မှာတော့ ဟင်နရီတစ်ယောက် DC နဲ့ လမ်းခွဲလိုက်ပြီဖြစ်တာကြောင့် သူ့ကို Superman အဖြစ် ထပ်မြင်ရဖို့ မရှိတော့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူ့ကို နောင်အနာဂတ်မှာ ဂျိမ်းစ်ဘွန်းမင်းသားအဖြစ် တွေ့မြင်ရမလားဆိုတာ ကတော့ ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာပါပဲ။
Ref; Heroic Hollywood
Lego တုံးပေါင်း ၃ သန်းကျော်နဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ တိရိစ္ဆာန်ပုံတူရုပ်တွေကိုခင်းကျင်းပြသထားတဲ့ တိရိစ္ဆာန်ရုံ
တကယ့်အင်းဆက်အစစ်အလားထင်မှတ်မှားစေမယ့် ဝါးနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ လက်ရာမြောက်အင်းဆက်ကောင်လေးများ
မထင်မှတ်လောက်အောင် ပြောင်းလဲသွားတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် ဝိုင်ဝိုင်း
အရေးကြုံချိန်မှာ ဆရာဝန်အဖြစ် ရှေ့တန်းထွက်လာတဲ့ နာမည်ကျော်တရုတ်ကာယဗလမယ်
နိုင်ငံများစွာ ဝင်ပြိုင်တဲ့ Kids Supermodel ပြိုင်ပွဲမှာ First Runner Up ဆုကို ရရှိသွားတဲ့ သမီးလေး ပုပု
ဟိုအရင်ခေတ်ကတည်းက ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ အလှအပဆိုင်ရာ ပစ္စည်းကိရိယာများ